कस्मेटिक दोष - वेन। उपचार धेरै विकल्पहरू प्रदान गर्दछ।
बाहिरबाट शान्तिपूर्ण सौम्य ट्यूमर, वर्ष आकार बढ्न रूपमा - यो एक Lipoma छ, तर मानिसहरू वेन कल। उपचार सकेसम्म सुरु गर्नुपर्छ। ट्यूमर, (दुई वा तीन सेन्टिमिटर सम्म) सानो छ सक्छन् चाँडै दबाइ diprospana दबाइ प्रयोग निर्मूल गर्न। यो उल्टो साँचो हो जो पछि, resorption Lipoma 0.3 मिलीग्राम मा एक राशि, मा प्रबन्ध छ।
एकदम अक्सर डाक्टरहरू यो सौम्य ट्यूमर चिन्ता छैन सुझाव। यसलाई स्पष्ट कस्मेटिक दोष हुन्छ र एक व्यक्ति हस्तक्षेप गर्दैन भने, यो स्पर्श गर्न सिफारिस गरिएको छ, तर केवल उनको अवस्था हेर्न। भने, तर, एकदम आकार मा वृद्धि हुनेछ, यो शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप गर्न Resort गर्न सम्भव छ। सञ्चालन, सरल छिटो र सामान्यतया स्थानीय एनेस्थेसिया अन्तर्गत प्रदर्शन हो। एउटा सानो चीरा, हटाइयो सामग्रीहरू, र दानाको खुर्केर सफा गर्नु गर्नुहोस्। यो उपचार को बेफाइदा scars सर्जरी पछि बाँकी छ।
Lipoma छ जहाँ स्थानहरूको एक किसिम, गठन गर्न सकिन्छ बोसो ऊतक। यो किनभने चयापचय प्रक्रियाहरू यसको उल्लंघन को छ, र त्यहाँ वेन छ। उपचार endoscopic हटाउने मदत संग बाहिर गर्न सकिन्छ। यो गर्न, कट, प्राथमिकताको छाला Folds मा, कम सजिलै देखिने यो खत बनाउन। को endoscopic सिस्टम परिचय, Lipoma अन्य Tissues अलग र हटाइयो। यदि त्यहाँ थाइरोइड, अग्न्याशय वा कलेजो समस्या हो, वेन पनि गठन गर्न सकिन्छ। उपचार सम्भव र Liposuction को मद्दत छ। त्यसपछि रोगी एक निर्वात ट्यूब प्रबन्ध र बोसो ऊतक को चूषण उत्पादन गरिएको छ। यो अक्सर कारण गठन Lipoma रक्सी दुरुपयोग, माथिल्लो श्वसन पर्चा र मधुमेह को घातक ट्यूमर उपस्थितिको हुन्छ भने हुनुपर्छ।
सबै भन्दा राम्रो तरिका को एक अझै पनि एक Lipoma को आत्म-विनाश छ। यो स्पर्श गर्दैन भने, यो अन्ततः नै, विकास सबै चरणमा मार्फत जाँदै समाधान हुनेछ। यो जीव जो तालिका को अगाडी हटाइएको थियो जो कि ल्याउन फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ स्मृति संग endowed छ। तपाईं कट्टरपंथी विधिहरू गर्न Resort छैन निर्णय भने, तपाईं वेन लोक उपचार निको पार्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, यो उचित पोषण र उपयुक्त जडीबुटी प्रयोग को उत्सव स्थायी हटाउन पर्याप्त हुनेछ विश्वास छ पाउडर शरीर।
उपचार सबैभन्दा प्राचीन र साँच्चै प्रभावकारी तरिका को एक साथ सुरु गर्नुपर्छ। यो फिल्म ताजा घरेलू चिकन अन्डा खाँचो लागि। सबै धेरै सरल। को फिलिमहरु Lipoma मा superimposed छन् र समय समयमा ताजा व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्थापन। प्रक्रिया पूर्णतया सबै वेन समाधान गर्दा क्षण अघि गरिन्छ। उपचार ताजा plucked पात र घ्यु सुनको whiskers विभिन्न पैक को आवेदन समावेश छ। पाना कट, एक सानो मुछ्नु, त्यसैले त्यो रस दिए र Lipoma मा राखे। शीर्ष फिलिम र एक संकुचन निश्चित ऊतक राख्न निश्चित हुन। यी बिरुवाहरु कस मदत बोसो छाला को धेरै सतहमा। त्यसपछि वेन ध्यान खुलेको र पूर्ण बाहिर रड।
उपचार वेन लोक उपचार सम्भव यस्तो सुंगुरको बोसो र यस्ता प्राकृतिक औषधीय उत्पादन, को माध्यम द्वारा पाकेका प्याज। यो सुन्दर दिँदै बिना, साना आकार प्याज, टुकडे करो Bake र चोट साबुन संग मिश्रण। , तपाईं शरीर मा सबै पाउडर गायब सम्म दुई तीन पटक एक दिन को नयाँ न्यूनतम परिवर्तन compresses को रूप मा एक मिश्रण लागू हुन्छ। बोसो संग उपचार उत्कृष्ट परिणाम दिन्छ। यो लसुन रस संग मिश्रित र एक मलम को रूप मा प्रयोग भएको थियो।
अग्रिम भविष्यवाणी गर्न एक Lipoma को उपस्थिति सम्भव छैन। डाक्टर सम्पूर्ण जीव को एक धेरै महंगा र जटिल प्रक्रिया अल्ट्रासाउंड सिफारिस हुन सक्छ। तर सबै भन्दा राम्रो समाधान उचित पोषण को उत्सव र यसको बारेमा आतंक को कमी छ। साँच्चै, हामी Lipoma निको गर्न सकिन्छ भनेर फेला, र यस को लागि विधिहरू प्रशस्त।
त्यहाँ गर्भवती महिला र कसरी लड्न रक्तअल्पता छ किन?
छाला मा पानी जस्तो blisters - आफ्नो कारण।
कान छेड्नु - अभिव्यक्ति वा सनक को तरिका?
स्याउ फूल weevil: को विवरण र यसलाई विरुद्ध लडाई। स्याउ फूल कीरा को तयारी
कसरी "म्यानकोफर्ट" मा लोभ बोममम बनाउन निर्देशन: निर्देशन
एक housewarming पार्टीको लागि एक उपहार - मजा लागि अवसर छैन?
Adularia (पत्थर): मान र गुण
को शेयर बजार मा बुल र भालु, "जनावर" को शेयर बजार को अनुहार
के पत्थर एक शुभंकर रूपमा वृष लागि उपयुक्त छ?
तलब ढिलाइ: जोखिम र सम्भव नतिजा।
म एक वाशिंग मिसिन मा कोट धुन सक्छन्? गरेको सम्झौता गरौं